Jupiter Series 3P / 3P High Frequency kupota yakakwirira arambe achirema shanduro mbiri-kutendeuka paIndaneti Ups aine goho simba chinhu 0,8. Kubvira 10KVA kuti 30KVA, zviri yakagadziridzwa pakatsikwa netsoka duku DSP zvemichina uye kushingaira chiyamuro simba chakaita kururamiswa magadzirirwo kuitira nani goho voltage mamiriro, simba unhu uye simba waivako nguva dzose. Its Dual mains zvinoshandisa pakurima kuchaita kuwana simba akavimbika musimba kusiyana-siyana munharaunda.
1.Online kaviri kutendeuka michina ine DSP kudzora
Jupiter akatevedzana rinoshandisirwa paIndaneti kaviri kutendeutsa michina kuti zvinobudirira putira pamusoro pomumbure vachivavhiringidza uye vakwanise yepamusoro mutoro uptime. A Digital Signal Processor (DSP) kudzora chinopa nani yokugadzirisa dzakakwirira unongotaura.
2.Output simba chikonzero 0,8
Kufananidzwa paIndaneti ups pamusika ano, Jupiter dzinoti (PHT3110 ~ PHT3330) yakakwirira maitikiro Ups kunopa nani goho simba chakaita kusvika 0,8. Rinopa yepamusoro kuita uye kunyatsoshanda kuti kutsoropodza mafomu.
3.ECO muoti mashandiro kuti simba kuponesa
Anopa kunyatsoshanda yakakwirira sezvinoita 97% kudimbura simba kushandiswa uye mutengo. Ups simba Chikumbiro Via kunofambira mberi yokunzvenga, nenguva achidzokera paIndaneti kaviri kutendeuka kana zvava kudikanwa.
4.Emergency simba kure (EPO) shanda
5.Wide chiyamuro voltage Range (190V-520V)
Jupiter dzinogona achiri kupa kugadzikana simba kwakabatana mano pasi kusagadzikana simba runyararo.
• Output simba chinhu 0,8
• Adjustable bhatiri nhamba
• jenareta enderana
• Active simba chinhu kururamiswa muna maitikiro zvose
• 3-Danho extendable ndinorova magadzirirwo optimized bhatiri waivako
• SNMP + USB + RS232 akawanda kukurukurirana
• Zvingakudetsera N + X yakafanana redundancy
10KVA-30KVA (vatatu-dzi uye Three outs)
3 x 400 VAC (3-danho + N)
190-520 VAC (3-danho) @ 50% mutoro; 305-478 VAC (3-danho) @ 100% mutoro
16Pcs (16-20Pcs chinjika)
16pcs (16-20 chinjika)
16pcs (16-20 chinjika) X2 hungiso
Ups chinzvimbo, Load pamwero, Battery pamwero, Inzwa Zvinotaurwa / Output voltage, zvinoyerera timer, Mhaka mamiriro
Vachiridza ose 4 mumasekonzi
Vachiridza ose wechipiri
Inorira kaviri ose wechipiri
Temperature uye Humidity
Asingasviki 60dB @ 1 Meter
Asingasviki 65dB @ 1 Meter
Previous: 40-120KVA High Frequency Online Ups (3: 3) Next:6-10KVA High Frequency Ups (1: 1)